သင့်ကိုယ်ပိုင် VPN server ကို Ubuntu, Debian နှင့် CentOS တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း Linux မှ
သင်၏ကိုယ်ပိုင် VPN server ကို Ubuntu, Debian နှင့် CentOS တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
Luigys toro | | GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါမကြာသေးမီကပြောင်းလဲခဲ့သောမြို့နှင့်တိုင်းပြည်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်အမြောက်အများကိုအသုံးပြုခဲ့ရသည် (ယခုပင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သော့ကိုရရှိသောဝိုင်ဖိုင်မှကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်မိသည် Aircrack-ng၊ Airmon-ng, airdump-ng၊ အရာ Kali Linux ကို install လုပ်ပြီးသား)ပြTheနာမှာဤဆက်သွယ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအလဟ can ဖြစ်စေပြီးမည်သူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဤပြproblemနာအတွက်အဖြေတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတင်ပြခဲ့သောပြtheနာဖြစ်သည် ရဲ့ linux ကိုသုံးရအောင် en ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Wi-Fi ကွန်ယက်များတွင်မည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်းသို့သော်၊ ၎င်းကို VPN သုံး၍ ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်၊ ၎င်းတွင်အခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေရသူများလွယ်ကူစွာ install လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် VPN server ကို Ubuntu, Debian နှင့် Centos တွင်ဖန်တီးပါ။
ဒီပြproblemနာရဲ့အဖြေကိုရှာပြီး၊ အခြားအားသာချက်များကိုပေးမယ့် VPN တစ်ခုကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သုံးစွဲသူနှင့်နည်းနည်းလေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲ VPN server ကိုအလိုအလျောက်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည့် script ကိုငါရှာနိုင်ခဲ့သည်။
2 IPsec ဆာဗာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ script ၏ VPN ၏ထူးခြားချက်များ
3 IPsec ဆာဗာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ script လိုအပ်ချက်များအပေါ် VPN ကို
4 IPsec ဆာဗာ configuration script ကိုအပေါ် VPN ကို install လုပ်ပါ
4.1 Ubuntu နှင့် Debian ပေါ်တွင် IPsec server configuration script ကို VPN များတပ်ဆင်ခြင်း
4.2 Centos တွင် IPsec server configuration script ကို အသုံးပြု၍ VPN ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
5 IPsec ဆာဗာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ script မှ VPN အပေါ်နိဂုံးချုပ်သည်
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် shell script ခွင့်ပြု Ubuntu, Debian နှင့် CentOS ရှိ IPsec ဖြင့် VPN server ကိုအလိုအလျောက် configure လုပ်သည် လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူပေါင်း IPsec / L2TP နှင့် Cisco IPsec protocols များကိုထောက်ပံ့သည်။ အသုံးပြုသူသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုယ်ပိုင် VPN အထောက်အထားများကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဆာဗာ IPsec ကျော် VPN ကို အသုံးပြုသူနှင့် VPN ဆာဗာအကြားဆက်သွယ်မှုရှိနေစဉ်၎င်းသည်ကွန်ယက်လမ်းကြောင်းကိုစာဝှက်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့်ကော်ဖီဆိုင်များ၊ လေဆိပ်များ၊ ဟိုတယ်ခန်းများ၌လုံခြုံမှုမရှိသောကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်အထူးအသုံးဝင်သည်။
ဇာတ်ညွှန်းကိုအသုံးပြုသည် မင်္ဂလာပါ အရာတစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်မှုသည် Linux အတွက် IPsec y xl2tpd အရာကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် L2TP ပံ့ပိုးသူ.
script ကိုမည်သည့် dedicated server သို့မဟုတ် Virtual Private Server (VPS) တွင်သုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို "user data" အဖြစ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည် အမေဇုံ EC2 ဥပမာအားဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းအတွက်၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်အား VPN တက်ရန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလည်ပတ်ရန်ခွင့်ပြုပြီးအမေဇုန်၏ VPS အခမဲ့တစ်နှစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အတွက်၎င်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
IPsec ဆာဗာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ script ၏ VPN ၏ထူးခြားချက်များ
အသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲ IPsec ဆာဗာပေါ်တွင်အပြည့်အဝအလိုအလျောက် VPN တစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်း
အမြန်ဆုံး protocol ကိုထောက်ပံ့သည် IPsec/XAuth ("Cisco IPsec")
ရရှိနိုင် Docker ပုံရိပ် VPN ဆာဗာမှ
UDP အတွင်းရှိ VPN အသွားအလာအားလုံးကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ
၎င်းသည် Amazon EC2 အသစ်များအတွက် "user data" အဖြစ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်
ဆာဗာ၏ Public IP နှင့် Private IP တို့ကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ပါ
အခြေခံ IPTables စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်ပြီးသင့်အားချိန်ညှိနိုင်သည် sysctl.conf
Ubuntu 16.04 / 14.04 / 12.04, Debian 8 နှင့် CentOS6&7တို့တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
IPsec ဆာဗာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ script လိုအပ်ချက်များအပေါ် VPN ကို
အထူးပြုဆာဗာတစ်ခုသို့မဟုတ် Virtual Private Server (VPS) လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည် အမေဇုံ EC2ဤ AMIs များထဲမှတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်
Ubuntu 16.04 (Xenial)၊ ၁၄.၀၄ (ယုံကြည်စိတ်ချရသော) သို့မဟုတ် ၁၂.၀၄ (တိကျသော)
Debian 8 (Jessie) EC2 ပုံများ
အပ်ဒိတ်များပါသည့် CentOS7(x86_64)
အပ်ဒိတ်များပါသည့် CentOS6(x86_64)
IPsec ဆာဗာ configuration script ကိုအပေါ် VPN ကို install လုပ်ပါ
Ubuntu နှင့် Debian ပေါ်တွင် IPsec server configuration script ကို VPN များတပ်ဆင်ခြင်း
ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ system ကို update လုပ်ရန်ဖြစ်သည် apt-get update && apt-get dist-upgrade ပြန်ဖွင့်ပါ။
VPN ကိုတပ်ဆင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါရွေးစရာများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးပါ။
ရွေးစရာ ၁: တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် VPN အထောက်အထားများကိုကျပန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ပါ
ရွေးချယ်စရာ ၂။ script ကိုတည်းဖြတ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင် VPN အထောက်အထားများကိုပေးပါ
wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh nano -w vpnsetup.sh [သင်၏တန်ဖိုးများနှင့်အစားထိုးပါ။ YOUR_IPSEC_PSK၊ YOUR_USERNAME နှင့် YOUR_PASSWORD] sudo sh vpnsetup.sh
Option ကို 3: VPN အထောက်အထားများကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ variable များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ
# အားလုံးတန်ဖိုးများကို 'တစ်ခုတည်းသောကိုးကား' များတွင်ပူးတွဲထားရမည်
wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh && sudo \_ VPN_IPSEC_PSK ='သင်၏ _ipsec_pre_shared_key' \_ VPN_USER ='သင်၏ _vpn_username' \_ VPN_PASSWORD ='သင်၏ _vpn_password' sh vpnsetup.sh
Centos တွင် IPsec server configuration script ကို အသုံးပြု၍ VPN ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ system ကို update လုပ်ရန်ဖြစ်သည် yum update ပြန်ဖွင့်ပါ။
Ubuntu နှင့် Debian ကဲ့သို့အဆင့်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးအစားထိုးပါ https://git.io/vpnsetup အားဖြင့် https://git.io/vpnsetup-centos.
IPsec ဆာဗာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ script မှ VPN အပေါ်နိဂုံးချုပ်သည်
ကောင်းပြီကျွန်ုပ်တို့ VPN တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကို VPN client မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရမည်။ OpenVPN ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ package manager နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Debian နဲ့ derivatives တွေအတွက်ဒါကိုအောက်ပါနည်းလမ်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ် -
sudo apt-get installv ကိုဖွင့်ပါ
၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် VPN ရှိရန်အလွန်ကြော့ရှင်းသောအဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်
browsing data ကိုဖျောက်ပါ။
geo-blocked sites များကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဒီဟာတွေကမင်းကိုပျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်ရှုပ်ထွေးပုံရပြီးသင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားလိုလျှင် VPN ကိုအမြဲတမ်းငှားရမ်းနိုင်သည် ဟိဟိကောင်းသောထင်မြင်ချက်များရှိခြင်းအပြင်အသုံးပြုသူအသစ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » သင်၏ကိုယ်ပိုင် VPN server ကို Ubuntu, Debian နှင့် CentOS တွင်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း
သူသည်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းဝန်ခံသည့်နေရာကိုသူတို့ဘာကြောင့်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာလဲ jajajjajajajjaja
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ဖြင့် Amazon ဥပမာတစ်ခုတွင် VPN ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသော VPN ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်တော့ပါကဥပမာအားဖြင့် port များထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းတို့သည် PPTP အတွက်သင်ရှိသည်။ TCP port 1723 ကိုဖွင့်ပြီး ID 47 (GRE) နဲ့ protocol ကိုဖွင့်ပါ။
L2TP အတွက်သင်သည် TCP port 1701 ကိုဖွင့်ရမည်။ သင် IPSec ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက UDP port 500 နှင့် ID 50 (IPSec ESP) နှင့် 51 (IPSec AH) ၏ protocols များကိုဖွင့်ရမည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုထည့်ပြီးသည်နှင့် netstat -ntpl နှင့်အတည်ပြုသည်။ တက်ကြွတက်လာပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။
Luigys toro ဟုသူကပြောသည်
ပြင်ပ firewall ရှိသော (ဥပမာ EC2) ရှိသည့် server များအတွက် UDP ports 500 နှင့် 4500 နှင့် SSP အတွက် TCP port 22 ကိုဖွင့်ရမည်။
ဆာဗာပေါ်တွင်ထပ်မံဆိပ်ကမ်းများဖွင့်လှစ်ရန်၊ EC4 ရှိသော်လည်း Server ကို restart လုပ်ပါ။ အဆင်ပြေသောအရာသည်ပြင်ပ firewall နှင့်အတူဖြစ်သည်။
Luigys Toro အားပြန်ပြောပါ
ကြီးစွာသော script အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ၎င်းသည် Iphone နှင့် Android တို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် openVPN ကို client တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုငါမသိ။
Ubuntu 16.04 terminal တွင်ငါ install လုပ်ထားသော server ။
ရော့ခ် -668 ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းကို dynamic ip ဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်နည်း။
အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက် noip.com မှာယူပါ။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာအော်စကာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ VPN ဆာဗာကိုကျွန်ုပ်၏ Linux ဆာဗာတွင် VPS တွင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လုံခြုံရေးလေ့လာမှုသည်၎င်းသည်တိုက်ခိုက်မှုပြုခြင်း၊ Smurf၊ ဆက်သွယ်မှုကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဒေတာများကိုကြားဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှုမရှိသော protocol များအသုံးပြုသောသော့အားလုံး၊ ဆိုလိုသည်မှာ encryption မသုံးသော connection များ၊ သတိပြုမိပြီးနောက်ချက်ချင်းကျွန်ုပ် VPN connection ကိုပိတ်ပြီး VPS ကိုပြန်လည်စတင်သည်။
ဤအချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဖော်ထုတ်သည်၊ ဤထင်မြင်ချက်များကိုဖတ်ရှုသောဤဆောင်းပါး၏ရေးသားသူနှင့် / သို့မဟုတ်စာဖတ်သူသည် VPN ဆာဗာကို install လုပ်စဉ်ကမသေချာမရေရာဖြစ်ခြင်း၊ အားလုံးကိုကောင်းကောင်းပြောခြင်း၊ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၌သူ၏အချိန်ကိုယူခဲ့သည့်အတွက်စာရေးသူအားငါကျေးဇူးတင်သည်။
ငါ ifconfig tun0 ပြုလျှင်ငါ့ကိုအမှားပေးသည်
အမှားရယူခြင်း interface သတင်းအချက်အလက်: စက်ကိုမတွေ့ပါ
အဘယ်ကြောင့် VPN မသုံးရကြောင်းယခုကျွန်ုပ်သိပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမလွယ်ဘူး၊ အဲဒါကိုပြုပြင်ဖို့ကငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်။ ၎င်းကိုလုပ်ရန်ပိုမိုရိုးရှင်းသောနှင့် ပို၍ ဂရပ်ဖစ်နည်းလမ်းရှိသလား။
Flowblade ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြောင်း ၁၀ ချက်
googler ဖြင့် Google Search, Google Site Search နှင့် Terminal မှ Google News